Dilkii Sheekh Maxamed Dubad oo Cagaha la Galay Qoyska Reer Jwxo-shiil – Rasaasa News
Feb 17, 2011 Baadhitaan ay sameeyeen Booliska Kenya ayaa waxay ku ogaadeen in Maxamed Macalin [seedi]uu ahaa shakhisga soo abaabulay dilka, Dilkii Sheekh Maxamed Dubad oo Cagaha la Galay Qoyska Reer Jwxo-shiil, Sawirka Maxamed Macali [Seedi] ayaa lagu dhajiyey garoomada Diyaaraha ee dalka Kenya, waxaa kale oo sawirkiisa la dhigay xuduuda
Nairobi, Jan 17, 2011 [ras] – Warar aanu ka helayno magaalada Nairobi dalka Kenya, ayaa tibaaxaya in Booliska Kenya uu si weyn ugu raad joogo Maxamed Macali Cali [seedi], oo ay walaalo yihiin afada Jwxo-shiil. Waxaa kale oo laga qabqabtay magaalooyin dhawra sida Nairobi, Garrissa iyo Dhadhaab, dad badan oo taageerayaal u ahaa Jwxo-shiil.
Baadhitaan ay sameeyeen Booliska Kenya ayaa waxay ku ogaadeen in Maxamed Macalin [seedi]uu ahaa shakhisga soo abaabulay dilka Sheekh Maxamed Dubad. Seedi iyo Ina Maryama Agan oo labadooduba ka tirsan kooxda Jwxo-shiil, ayaa bil ka hore tagay Bariga Afrika, iyaga oo wada lacag ay soo dhiibtay Eritrea, taas oo loogu talo galay in lagu waxyeeleeyo shakhsiyaad dhawra oo u dhashay degaanka Somalida Itobiya. Waxaa naxdin ah in dilka Sheekh Maxmed Dubad uu Ogaa nin uu Adeer u yahay oo ka tirsan kooxda Jwxo-shiil.
Sida laga soo wariyey ina Maryamo agan, oo isaga laftigiisu xiligan dhuumasho ku jooga Kenya, in qorshaha ay u tageen Kenya uu ahaa arin fool xun, wuxuuse sheegay in markii uu tagay xerada Qaxootiga ee Dhadhaab uu gaabsaday.
Sawirka Maxamed Macali [Seedi] ayaa lagu dhajiyey garoomada Diyaaraha ee dalka Kenya, waxaa kale oo sawirkiisa la dhigay xuduuda uu dalku Kenya la wadaago dalalka Bariga Afrika. Maxamed Macalin [seedi] ayaa haysta dhalashada dalka Canada, waxaana suurto gal ah in uu isku dayo in uu u baxsado dalalka Dariska si uu uga dhoofo.
Ka dib kolkii la helay wararka sheegaya in kooxda Jwxo-shii, ay ka dambaysay dambiga ka dhacay Garrissa, ayaa waxaa dhuumasho ku jira dhamaan xubnihii Jwxo-shiil, u joogay Bariga Afrika sida; Cali Maxamed Xuseen [Cali-dheere],Nuur Maxamed Faatule, Maxamed Shariif Cumar iyo Cabdi Cabdulahi iyo kuwa kale.
Dilka marxuum Sheekh Maxamed Dubad, ayaa waxaa gaystay afar nin, oo inta ayna dilka gaysan Gaadhiga ay hawsha ku fuliyeen ka kiraystay nin ay Sheekh Maxamed Dubad, ilma adeer yihiin, si ay dilka ka dib isaga fogeeyaan tuhun.
Inta uusan dilku dhicin, waxaa guriga Sheekh loo soo diray ruux haween ah oo hubinaysa joogitaankiisa, waxay sheekh waydiisay in qol kiro ah gurigiisa ka banaan yahay. Kolkii ay ka baxdayna 2 nin ayaa guriga soo gashay oo rasaas wajiga kaga dhuftay Sheekh Maxamed, 2 nina gaadhiga ayey sii dhex fadhiyeen.
Kolkii uu dilku dhacay way cabsadeen mana ayna haleelin in ruuxii lahaa gaadhiga ay u celiyaan, waxayna gaadhigii iska dhigeen Geerash. Subaxnimadii kolkii loo soo baxay aaska Sheekh Maxamed, ayuu ninkii gaadhiga lahaa damcay in uu kaga qayb galo aaska, wuuse waayey nimankii gaadhiga ka kiraystay wuxuuna u qaatay in ay la baxsadeen. Wuxuuna yadlihii gaadhigu wargaliyey Booliska, baadhid ka dib Boolisku waxay gaadhiga ka heleen Geerash, waxaana la xidhay ninkii gaadhiga lahaa iyo waardiyihii Geerashka.
Sidaas ayey Boolisku ku tageen guryaha nimankii gaadhiga kiraystay, ilaa iyo hadana waa la doon doonayaa, waxaase la qabtay dad ay saaxiibo yihiin oo la socday arinta dilka, iyaga ayaana bixiyey in Maxamed Macalin uu amray dilka.
Masuuliyiinta Somalida ah ee Kenya iyo shacabka Somalida ah ee reer Kenya ayaa siiya Jwxo-shiil, taageero iyaga oo loo gooyo warqaha aqoonsiga ee Kenya, waxayna sida ay doonaana u dhex maraan dalka Kenya iyaga oo isticmaalaya lacago badan oo ay Eritrea siiso.
Waxaa laga yaabaa in arinta dilka Sheekh Maxamed Dubad Xirsi, ay lugta la gasho masuuliyiin iyo ganacsato reer Kenya ah.Waxaa kale oo suurto gal ah in dilka Sheekhu lugta la galo beel uu Jwxo-shiil abaabulay.
Waxaa socda kulamo u dhaxeeya odayaasha beelaha Ogadeen ee degan Garrissa, oo ay ku doonayaan in ay ku baajiyaan gacan qaad ka yimaada reerka uu ka dhashay Sheekh Maxamed Dubad Xirsi oo kooxda Jwxo-shiil ay bartilmaameedsato.
Waxaa isweydiin leh muxuu Jwxo-shiil, ka helaa dilka qarsoon ee masuuliyiinta Ogadeen? Jawaabta dadweynaha ayaan u dhaafaynaa.
Jaaliyada Gabalka Qoraxeey ee Dalka Yemen oo Tacsi u Diraysa Qoyska Reer Dubad Cagoole